Ny ovy dia zavamaniry misy vodiny azo hanina sady be tavolo, mitovitovy endrika amin’ ny vomanga. Antsoina ihany koa hoe ovimbazaha ity zavamaniry ity. Solanum tuberosum ny anarany ara-tsiansa.
Ny vodin’ ny ovy dia isan’ny foto-tsakafon’ ny ankamaroan’ ny mponina amin’ ny faritra manana toetany antonony. Zavamaniry afaka velona mandritra ny taona ny ovy. Ny tahony, izay mety mahatratra iray metatra, dia afaka mitsangana na mandady. Maranitra ny raviny ary miloko fotsy na volomparasy na anelanelan’ izany ny voniny. Afaka mamoa misy vihiny maro ny ovy. Ny tahony sy ny raviny ary ny vodiny dia misy karazana alkalôida mahafaty atao hoe sôlaninina.
Avy any amin’ireo tendrombohitra Andy amin’ ny faritr’ i Pero ny ovy, any amin'ny tapany atsimo-andrefan' i Amerika Atsimo, ka efa fantatry ny olona tao hatramin'ny 8 000 taona lasa ny fampiasana azy.
Tamin’ ny taonjato faha-16 izy vao nampidirin’ ny Espaniôla tao Eorôpa. Niely haingana tany amin’ ny tany manana toetany antonony ny ovy, ary tamin’ ny fanombohan’ ny taonjato faha-18 vao tafiditra tao Amerika Avaratra ny fambolena azy. Tamin' ny taona 2015 dia firenene 150 mahery no mamboly azy eran' izao tontolo izao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovy&oldid=999160"
Dernière modification le 20 Desambra 2020, à 08:03
Voaova farany tamin'ny 20 Desambra 2020 amin'ny 08:03 ity pejy ity.